ကွန်ပျူဗေဒ သုခုမ: ဖုန်းရွှေပညာ (၁)
စာသိအရတော့ “ဖုန်းရွှေ” ပညာဟာ “နေအိမ်၊ အဆောက်အဦ အခင်းအကျင်း” တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပညာဖြစ်ပြီး “နေအိမ် အဆောက်အဦပညာ” (ဂေဟာဗေဒ)လို့ ခေါ်ရမလား ထင်ပါတယ်။
သို့သော် အဆောက်အဦး အခင်းအကျင်းပညာကလည်း “ဖုန်းရွှေ” ပညာရပ်အောက်က ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ လိုင်းခွဲတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အဆောက်အဦး တစ်ခု ဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမြေနေရာမျိုး ရွေးရမယ်၊ ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဆောက်ရမယ်၊ ဘယ်လို အခန်းဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ဖွဲ့ရမယ်၊ ဘုရားစင်က ဘယ်နေရာ၊ ဧည့်ခန်းက ဘယ်နေရာ ၊ မီးဖိုဆောင်က ဘယ်နေရာ၊ အိမ်သာ ရေချိုးခန်းက ဘယ်နေရာ . . . စသည်ဖြင့် စနစ်တကျ နေရာချထားတဲ့ ပညာကို “ဖုန်းရွှေ” ပညာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ “လေကြော” နဲနဲ ရှည်ချင် ပါသေးတယ်။ တရုတ်လူမျိုးများဟာ တခြားကိစ္စတွေမှာတော့ မသိဘူး။ သူ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ နေရာမှာတော့ ချီးမွမ်းဖို့ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးလို့ ပြောရမလား မသိပါ ? ။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ “လူ့ယဉ်ကျေးမှု (Human Civilization)” အစောဆုံး လူမျိုးကြီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အနှစ် (၅၀၀၀)ကျော်လောက်ပြီလို့ ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
“ကွန်မြူနစ်ဝါဒ” ရဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ပြီး (မော်စီတုန်းခေတ်) အလွန်ဆိုးဝါးလှတဲ့ “ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကာလ” ကြီးမှာ တရုပ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် များစွာဟာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို “အမှောင်ကာလကြီး” ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တောင်မှ တရုပ်လူမျိုးများဟာ သူတို့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို (အသက်နဲ့ရင်းပြီး) ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဆက်လက် ထိမ်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် တရုတ်သူဌေးကြီးများသည်လည်း တရုတ်ရိုးရာ ဂမ္ဘီရပညာရှင် များနှင့် တိုင်ပင်နှီးနှောလျှက် ရှိနေပါ သေးတယ်။
“ကွမ်ရင်မယ်တော်” ကျောင်းများ ၊ ဘုံကျောင်းများ တွင်လည်း မိမိတို့၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် “စာချ” လျှက်ရှိသော တရုပ်လူမျိုးများ အများအပြားကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂၁)ရာစု အ၀င်ကာလမှာ စီးပွားရေး နှင့် နည်းပညာအရာမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၁) အဆင့်သို့ ရောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးကြီး တစ်မျိုးဟာ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှုအတွက် “ဂမ္ဘီရပညာရပ်”များ အပေါ်တွင် လုံးဝ အားထားယုံကြည် လျှက်ရှိသည်မှာ ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ပင် မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လက်တွေ့ အောင်မြင်နေကြပါတယ်။
ဒါဟာ ဂမ္ဘီရ ပညာရပ်များကို ခေတ်နှင့် ဆီလျှော်မှု မရှိသော အယူသည်းမှုများအဖြစ် ရှုမြင်နေကြ သူများအတွက် စဉ်းစားဖွယ်ရာ ကိစ္စကြီး တစ်ခုပါ။
ကျွန်တော် လက်တွေ့လေ့လာ ကြည့်သလောက် တရုတ်လူမျိုး (၇၀)% လောက်ဟာ “ကွမ်ရင်” မယ်တော် ကျောင်း ၊ ဘုံကျောင်းများမှာ “စာချ” ခြင်း (သို့မဟုတ် အလားတူကိစ္စများ) မပြုလုပ်ဘဲ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြုလုပ်လေ့မရှိကြပါဘူး။ “စာချ” လို့ ရတဲ့ အဖြေများကိုလည်း တသွေမတိမ်း လိုက်နာပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိကြတာကို လေ့လာဘူးပါတယ်။
“ဖုန်းရွှေ” ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွေ့ “ခံလိုက်ရတာ”လေးတစ်ခု ရှိလို့ ဖောက်သည်ချ ချင်ပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်လောက်က ကျွန်တော် လမ်းမတော် (၁၉)လမ်း မှာ အခန်းငှားနေရာကနေ – အိမ်လခတွေ အရမ်းတက်လာလို့ ဘုရင့်နောင် (သီရိမွန်) အိမ်ယာ ကို ပြောင်းလိုက် ရပါတယ်။ အဲဒီ အိမ်ယာက အခန်းမှာ ဘုရားခန်း တစ်ခန်း ၊ ဧည့်ခန်း တစ်ခန်း ၊ အိပ်ခန်း (၂)ခန်း ပါ,ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မိသားစုက “ကြီး” တော့ ဘုရားခန်း တစ်ခန်း သပ်သပ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘုရားစင်ကို ဧည့်ခန်းထဲ ရွှေ့လိုက်ရပြီး ဘုရားခန်းကို လူနေလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရားစင် နဲ့ နောက်ဖေး အိမ်သာပေါက်က တစ်တန်းတည်း ကျနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ရွှေ့လို့ရပါဘူး။ “ဖုန်းရွှေ” ပညာအရ လုံးဝ မအပ်စပ်တဲ့ အရာပါ။
“ဖုန်းရွှေ”က ဒီတင် မပြီးသေးပါဘူး။ မနှစ်က နွေရာသီ မတိုင်မှီလေးမှာ “စမ်းချောင်း” က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် “ကျွန်တော် အခုနေတဲ့ “အလုံ” ရပ်ကွက်ထဲ ကို ပြောင်းလာတယ် ကြားလို့ ကျွန်တော် သွားတွေ့ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အခန်းမျာ နေရာချထားပုံက – ဘုရင့်နောင်မှာ ကျွန်တော် နေတုန်းက အိမ်ခန်း ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း “ဘုရားစင်” နဲ့ “အိမ်သာ” က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီဘုရားစင်ကို နေရာ ချက်ခြင်း ရွှေ့လိုက်ဖို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ ယုံကြည်ဟန် မတူပါဘူး။
သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ အဲဒီ နွေရာသီမှာဘဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ “ကိုယ်တစ်ခြမ်း“ လေဖြတ်သွားပြီး တော်တော်လေး ကုယူလိုက်ရပါတယ်။
ကဲ – တကယ်ဘဲ “ဖုန်းရွှေ” ပညာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလား ? တိုက်ဆိုင်မှုလား ဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ “ဖုန်းရွှေ” နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်မပြောပြ နိုင်သေးပါဘူး။
ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗေဒင်ဆိုက်တွေလည်း ပေါ်လာပေမယ့် နောက်ထပ် Update တက်မလာကြတော့ပါဘူး။ မြန်မာ စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာအုပ်အများအပြား ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အများစုကတော့ ဆရာဟိန်းလတ်ရဲ့ လက်ရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ “ဖုန်းရွှေ” ပညာရှင်တွေဟာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဖွဲ့စည်းပြီးတောင်မှ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ နေရာချထားခြင်းများကို အကြံပေးမှုကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိကြပါတယ်။ အခကြေးငွေကို ဒေါ်လာ သောင်းနဲ့ချီပြီး ယူကြတယ်လို့ ဖတ်ဘူးပါတယ်။
ဖုန်းရွှေ အပိုင်း(၁) ဤတွင် အဆုံးသတ်ပါပြီ။ နောက်ထပ် ဖုန်းရွှေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေရှိရင် (စာအုပ်ထဲကမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကြုံရတာလေးတွေ ဖောက်သည်ချပြပါဦးမယ်)
Posted by Tin BoBo at 8:14 PM